St Nicholas Day iholide simo izingane
Uma ubheka ikhalenda, nakuba isonto, nakuba wokuziphilisa, kusobala into okusobala - izenzakalo ekuphileni kwethu okuningi. Kukhona encane, imikhosi luyingxenye professional ezifana usuku sokuma noma Isikhala, kodwa kukhona futhi ukugujwa emhlabeni wonke emhlabeni jikelele. Lezi zihlanganisa Christmas, Unyaka omusha, Easter futhi, yebo, ngosuku Nikolaya Chudotvortsa.
Likhona St Nicholas?
Ngokungafani othandekayo, kodwa yasungulwa uSanta Claus, St Nicholas wahlala emzini SebesePathara, ayese-Asia Minor ngempela. Kwenzeka lokho emuva ekhulwini lesi-3. Lo mfana kwaba wamukelekile, abazali wacabanga ingane isipho sikaNkulunkulu, ngakho wawunika konke okusemandleni: ukujula, imfudumalo nothando. Lapho ekhula, wanquma ukuba anikezele ukuphila kwakhe kuNkulunkulu futhi amadoda. St Nicholas waba umpristi, futhi kamuva - uMbhishobhi eMira. Isici yalesi indoda engcwele yayiphezu ukuthi wayezama ukwenza okuhle ngokungaziwa uzama ukuba ningayeki lutho ngokwayo. Yena udumo izimangaliso eziningi nasemisebenzini emihle: ukuvuselelwa ukuphila iphahlazeka itilosi isiphepho okwakungakaze ukuphana umvuzo esiza abantulayo usizo izintandane abaswele. Ukuze umsebenzi nesihawu nokho yaziwa abantu, wabiza flatterers yakhe, noma Wezimangaliso, kanye nosuku lokuzalwa beqala ukujabula unyaka ngamunye. Man, yonke impilo yami ukusiza abantu, waba enamathiselwe esigabeni yabangcwele. Namuhla kubhekwa ongumvikeli abahambi, amatilosi, abaswele kanye nokuhlupheka. Ngaphezu kwalokho, waba isibonelo okuphakade sokukhathalela futhi umusa wangempela.
Kuthiwa kudala emkhayeni ke wayenamadodakazi-uMlobokazi ezintathu, eyise angashadi. Ngakho kangangokuba, ukuthi abazali bayahamba ukuphoqa izingane zabo imali ngendlela futhi bengafaneleki. Nikolay Chudotvorets bezwa lokhu, waqala ukuba baphonse kanjani lab 'odade abampofu igolide e ngefasitele. Intombazane eduze kweziko nje hung amasokisi abo omiswe lapho, futhi izipho falling. Ngenxa yalokho, iSt Nikolay Spas kusuka amantombazane ihlazo futhi wabenza isiphetho bajabule kakhudlwana. Kamuva, waqala ukunikela izipho bonke abadinga: izidakamizwa - abampofu, izingubo ezifudumele - izintandane amathoyizi - izingane eziphuma emindenini ehlwempu. Kusukela ngaleso sikhathi, abantu bayaqiniseka ukuthi uma isidingo kakhulu Nikolay Ugodnik ngempela kuzokusiza.
Nikolina isiko usuku
Isiko ukugubha usuku St Nicholas ku 19 Disemba. Kungenxa nalesi celebration isiyaluyalu okuthunyelwe-New Year iqala. Ngeshwa, kube khona izikhathi lapho abantu baye bazama nisuse ukholo kuNkulunkulu, izimangaliso, inganekwane: Ingabe ngamaholide enkolo, acekela isonto. Ngenxa yalokhu ukugubha behlonipha St Nicholas isikhashana ngendlela engenabulungisa ukhohliwe, kodwa manje bavuselela isiko. Namuhla, izindlu bayahamba ngoba Meatless, kodwa amatafula esicebile njengoba abangani izitha (kunenkolelo idili buyisana ezilwayo), kanye nezingane ngaphansi ezihlalweni amaswidi, kumnandi "Nikolaichik" nezinye izipho.
Ngo izikhungo zezingane, amasiko, ukuhlonipha usuku St Nicholas. Iskriphthi ngokuvamile ayilungiselele kusengaphambili, futhi iholide Kulindeleke izingane okuningi, egijima esimweni fabulous.
Kuyaphawuleka ukuthi ekuqaleni imikhosi wafaka Cologne. EJalimane lasendulo, Disemba 6 (kubala Gregorian) izingane wakhipha amaswidi behlonipha St Nicholas. Ngokulandelayo, isiko ukusabalala nasendlini ngendlu: legend of odade, izingane waqala hang amasokisi on the iziko noma ukubeka amabhuzu out emnyango elinde izipho ezivela saint ezinhle. A izingane Naughty ekuseni wathola induku esikhundleni amaswidi.
ENetherlands, kunenkolelo ukuthi Wonderworker oseyili emkhunjini, ngakho abantu abalifaki izicathulo ophucuziwe aphume endizeni kusihlwa. Ngosuku lomkhosi St Nicholas ngalesi simo ayilungiselele kusengaphambili e-Italy, eFrance, eJalimane: kukhona iya Nosingatha Imikhosi Yasebukhosini Nemibukiso, abantu Costumed behlabelela kamnandi izingoma yendabuko bese nijabula ngokusuka enhliziyweni. Austrians nabasePoland bakholelwa ukuthi ngobusuku bangaphambi leli holidi esihogweni Naughty ukuthi ongcwele ngempumelelo dingisa kude, ungakhohlwa ukuba baphonse izipho emabhuzwini.
Idili kokuncane kunakho
Izingane zabo bonke ubudala balinde amaholide kanye nezipho. Yiqiniso, abadala kufanele ugcine le kobufakazi obuphathekayo futhi ngingakazi lutho ezimangalisweni. Amaholide anjalo like ubuhlalu azixhunywe kuchungechunge zezinkumbulo ebuntwaneni, ngaphandle okuyinto ukuphila unesicefe. Iskripthi ngoba usuku St Nicholas izingane ezincane zidinga ukuba ngendlela elandelayo: okulula ngcono. Kwenza akukho mqondo ukuya ingxoxo evamile zenkolo mayelana nencazelo holidi kusukela umbono wesonto Orthodox noma zama ukukhanyisa isihloko ngokombono wefilosofi. Izingane ezincane iqembu, okungase babuthana ekhaya cafe yezingane, ngosuku St Nicholas ungachitha ngalesi simo samaholide scheme elinjalo.
Izingane kuyoba interesting ukuzwa indaba nehaba mayelana Nicholas umfana, okuyinto neze wayazi ukwehluleka. Ngolunye usuku, yena waphawula ukuthi abangane bakhe ufuna sijabulele ukudla okwehl 'esiphundu futhi ukudlala amathoyizi enhle, kodwa wathanda ukuba kukulahlekele. Khona-ke lo mfana wakhetha ukunika izingane amathoyizi abo, izingubo kanye amaswidi ayenakho eziningi. Kodwa wawanika izipho e Kiddies imfihlo nelalelayo kuphela. Kanjalo-ke, abantu namanje ukuthi ungubani lokuthi ayaziwa, abizela kuye njengomuntu olungile.
Eceleni izingane eza unodoli-umfana, esibuza "imibuzo ezinzima" yohlobo: "Ingabe niyabalalela yini abazali benu?" Noma "Ingabe udla iphalishi?".
Zonke izingane kuthiwa abalalelayo, onomusa futhi omuhle, ngakho Nicholas kuvula isikhwama sakhe voluminous nangesandla esivulekile ngaphandle izipho kubo.
Ngemva enjalo omuhle ulandele funny imidlalo ongaphandle.
Le nguqulo express ingasetshenziswa yini ngokuphepha ngosuku St Nicholas. Iskriphthi ukuze izingane zasenkulisa ubudala, efana osekushiwo, kulula ukusebenza kunoma iyiphi indawo ekahle.
Ukuze izingane ezindadlana kuyinto izithakazelo kwande, kukho fabulous. Tale simo ngoba usuku St Nicholas ezingase zithathwe ngendlela ezihlekisayo. Phela, ulwazi isazoqhubeka lidluliselwe, kodwa nje ngeke uthole nesithukuthezi.
Ekuqaleni kudingeka isimo inkinga: isibonelo, inhlamvu engalungile enchanted imbongolo ozithandayo Nikolaya Chudotvortsa futhi izingane ukuba asitshele ke.
Kuze kube yimanje, bafeza umsebenzi wangempela futhi iwubuphukuphuku: ukuqagela nezimfumbe e imvumelwano, thola umehluko phakathi izithombe, ukugxumagxuma phansi, ulingisa izilwane.
Uma imbongolo usamkhumbula St Nicholas siguqule okubi ku isimilo esihle kanye intshiseko jikelele ihambisa izipho.
Ukuze abafundi abasebasha futhi kudingekile ukulungisa ekuseni ngosuku St Nicholas. isinyathelo iskripthi kungenziwa landiswa ngokwengeza nozungu ngesimo uhlamvu okubi, uhlobo "vredomora". Indaba ngomlando holidi kanye namasiko, futhi, kudingeka kancane nzima, ngokobudala.
Ngosuku St Nicholas the script kumele aqukethe indzaba lemfisha mayelana iholide, kodwa akufanele mukela lo yomkhosi. Kungcono uma uzokwenza uhlamvu fabulous noma wasenganekwaneni, ezifana ingelosi.
Ngaphambi ufaka umlingiswa oyinhloko webhayisikobho umuntu iholide ehholo siphela villain (Brownie, a-earphone, isiphepho esikhulu seqhwa, le Fool), futhi uqala "Troll" Izinti Little: ubuza imibuzo oyisiphukuphuku, kuphakamisa (ofunda emaphazili lanetincetu ezihlekisayo, otgadka okungalungile).
Ungakwazi ukuletha ukuthela umqondo omuhle. Ukuthola ukuthi imizamo evamile Nicholas kuyofika kuphela abalalelayo, abahlanganyeli umcimbi wakhipha kusukela ngaphansi kwesitulo, uthisha pre-ezilungiselelwe, abantu abamnyama (amaphutha), abaphonse ngikweluleke.
Lapho, ekugcineni, St Nicholas iza, kuza isikhathi imidlalo ezihlekisayo, umkhakha netinkondlo. Imidlalo kungaba ezahlukene. Ngokwesibonelo, kuyinto ephelele game yamahlaya "Gqoka omunye." imithetho yakhe ubilise phansi yokuthi iqembu elilodwa ingubo amagilavu, kodwa ngakolunye - a ijazana lasebusuku. Inkinobho ngakolunye kubalulekile ukubophela isembatho ngokushesha ngangokunokwenzeka. Noma umncintiswano "Ngubani namazinyo namandla": amaqanda abilisiwe ku spoon kudingeka baphathe uqale ukucindezela amazinyo akhe, bese uzama hhayi ukulahla kuso. Futhi ezithakazelisayo kuyinto umdlalo "Gull": kubalulekile ukuba bagcwalise isikhwama ngokuhleka, misela ngu tickling.
Tinkondlo ngoba Nikolaya Chudotvortsa
Ngosuku St Nicholas simo kuyinto engacabangeki ngaphandle inala izinkondlo. Ukuze ubuyise izinombolo zabo umbhalo omnandi, sipho, isibonelo, kuyinto:
Ezikabani izinyathelo creak ngemva komnyango?
Futhi esikhwameni omkhulu,
UNikolai ugijimele endlini yakho!
Hudulela siveza ukuba izingane,
Ake uwalethe wonke,
Yini eyabangela ukuba umuntu omdala?
Ngaphandle amaswidi nonodoli
Alfabhethi, lapho eziningi beeches,
Waletha kuwe umusa,
Futhi kufezeka iphupho!
Linda ubudala ngonyaka Udambisa
Nicholas uyofika zonke!
Winter isinyathelo waseshashalazini
Isimo pageant kuze kube sosukwini St Nicholas is ifanelekile ukwenza, ikhumbula lapho luzoqala. Kungaba ugcwele udwendwe onesizotha eholwa Nicholas nezingelosi zakhe eyayihambisana nalo. Odwendweni iya isikwele, esinqeni umuthi oyinhloko Christmas womuzi, ukuze bavule imikhosi kaNcibijane. Konke lokhu kuhambisana kumnandi, ukudansa, iziqhumane, futhi izingane, etshela inkondlo nobe ingoma, simfanele leso sipho esisemthethweni. Ngosuku ngale ndlela kuyafaneleka ukuvula isitolo esiza abantulayo, lapho abantu bakhululekile ukuba lethani izingubo, izincwadi, amathoyizi yemikhaya ehluphekayo nezintandane.
Futhi le simo ikhonsathi usuku St Nicholas kungaba kwenziwe phezu eqhweni. Inkhulumo lelungiselelwe ukusebenza show bemizimba egqoke njengoba Nikolaya Chudotvortsa, amademoni nezingelosi njengoba esihogweni.
namaqhinga Innocent kwabazali
Ngosuku St Nicholas iskripthi - into nje ukuthi ekhathaza abazali. Kubalulekile ukuthi ingane intandokazi ukunikeza futhi indlela yokukwenza mnandi. Thola usizo kusukela abafundisi kwezikhungo zezingane. Iqiniso lokuthi iskripthi ngosuku St Nicholas ngokuvamile iqala ubhala incwadi eya incelebana ophanayo. Lo mcimbi owamenyezelwa ngempela ezidabukisayo: ibhalwe ngu iphepha okhethekile nge Monograms futhi "segolide" esibayeni. Izingane ezindadlana kufanele uzibuze chaza kafushane ukuziphatha kwabo kulo nyaka, futhi ekupheleni ucele isipho wamukelekile. Lokhu "inhlolovo engaziwa" Kunenkolelo ngosuku olwandulela lo mkhosi, bese zikhale up abazali uthisha "unika" ulwazi imfihlo. Ngenxa yalo msebenzi, ingane ithola isichathule kahle ukuthi bacela UNicholas. Ngakho, umntwana uzokhumbula iholide isikhathi eside, futhi okubaluleke kakhulu, ngeke ngentshiseko liyaqhubeka likholelwa ezimangalisweni.
Njengoba izipho, khona-ke wonkhe umuntfu kweyeme etinyatselweni yobudala kanye okuthandayo. Yiqiniso, uma ingane ifuna okuthile - umdlalo computer, i-CD ne cartoon zakho ozithandayo noma unodoli - isimo esicacile. Phakathi kwezinye izinto, singakwazi ukunikela ngokuphepha amabhuku lwaletinye tifundvo, zezingane art kits izingane - amathoyizi, ukuthuthukisa emihle motor amakhono, namazinyane azo ezithambile nezilwane. Kwakamuva baba abangane abakhulu futhi usize uyiqili kancane ukulala egumbini elimnyama, futhi bayonakekela ubani. Nokho, amathoyizi smart (puzzle, Umklami) kutsikamete ekukhuleni kwengane. Yiqiniso, ubumnandi e ngaphandle mncintiswano kulolu hlu.
Kungakhathaliseki ukuthi ayehlala ezindlini simo ngoba usuku St Nicholas, amaswidi ziyisibopho futhi njalo ezifanele. Kukhona iresiphi zakudala bendabuko "Nikolaichik" ngoba, kungakuhle kakhulu, ngaphandle kwabo ayenzi mkhosi onjalo. Hlanganisa ufulawa, ubisi, amaqanda, uju, ibhotela, ushukela kanye steamed poppy wayixova inhlama. Of kwesigubhu enwetshiwe ezibaziweyo izibalo ezincane wabhaka. Ready ezenziwe, basuke bazithela ushokoledi Uqweqwe (ibhotela, ushukela, imajarini, ukhokho, ubisi kufanele okwakumelwe zixutshwe bese abilisiwe), futhi phezu umdwebo lemon amnandi. Ngakho abayoba ukwenqabela enjalo uswidi?
Ingqikithi ezingokomoya lomkhosi
Ngalolu suku, kubalulekile ukuba ulethe injabulo kumakhelwane womuntu, okunikeza impahla izibusiso abampofu nezintandane, musa skimp on iminikelo ingenzeka. Ngokwalokho okuvezwa umlando, St Nicholas e kwaze kwaba sekupheleni kokuphila cishe sekube isinxibi, kodwa kwakusasele phakade kwimemori zabantu. Kamuva wasiza labo kanye ukutakulwa. Le iholidi ukhumbuza abantu iqiniso elilula kodwa elibalulekile: okuhle liyabuya ezinhle ngaso sonke isikhathi.
Imincintiswano izingane emcimbini lokuzalwa - futhi kumnandi, futhi iphephile
Amadoda zikanokusho efudumele sika semvu coat ne hood
Uhlelo lomthetho. Ukwahlukanisa izikhungo zomthetho
Indlela udlalise izindlebe, futhi kungani ziwusizo?
Ukwakha izindlu: uhlelo oludumile kakhulu. Ukwakhiwa kwezindlu kusuka kubha